China BOND 495 ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ Jiuerjiu
လူမီနီယမ် Tube စီးရီး
Jiuerjiu အထွေထွေကော်သည် 502 ၏အဆင့်မြှင့်တင်ထားသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။
ဝိသေသလက္ခဏာများ & အသုံးပြုမှု
ပတ် ၀ န်းကျင်မျိုးစုံ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှောင်ကြိုး၊ သတ္တု၊ ရာဘာ၊ ပလတ်စတစ်၊ သစ်၊ ကြွေထည်၊ ဖန်နှင့်အခြားပစ္စည်းများအတွက်သင့်တော်သည်။
အနိမ့်အပွင့်, ကြာရှည်ခံမှု, မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိကိုနှင့်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများ, ကောင်းမွန်သောကော်နှင့်ကြာရှည်ခံမှုနှင့်အတူစိမ်နှင့်စိမ် matrix ပစ္စည်းများနှင့်အတူ။
Net Gram: 20 ဂရမ် 20G / pcs * 12pcs / box ကို * 12box / ctn
သက်တမ်း: ၁၂ လ
ထဲမှာပါတဲ့ (CPS): 80-120
Bondingspeed (s): ၈
ကွာဟချက် (မီလီမီတာ) ၀.၁
အစွမ်းသတ္တိ （Mpa）: 26
သက်တမ်း (လ) 12
၎င်းသည်ဖိနပ်၊ သားရေ၊ ရော်ဘာနှင့်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများအတွက်အထူးထုတ်လုပ်ထားသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများသည်အဖြူရောင်အဖြူရောင်၊ စွမ်းအားမြင့်မားခြင်း၊ သက်တမ်းကြာရှည်စွာအသုံးပြုခြင်းနှင့် ၀ တ်ဆင်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဖိနပ်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများရှိဖိနပ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်နှင့်ချည်နှောင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီးဖိအားနှင့်ကွေးနေသည့်အခါအက်ကွဲခြင်းမရှိပါ။
Item NO ။ ပုံ ဖော်ပြချက် PCS / ကဒ် PCS / box ကို ကတ်များ / ctn CBM
401 ဂရမ်: 20 ဂရမ်
1 12 12 ၀.၃၂
1. ဤကိုးကားပုံပေါ်တွင်အခြေခံသည်, သင်၏စစ်မှန်သောနမူနာနှုန်းစျေးနှုန်းပြောင်းလဲလိမ့်မည်
2. စျေးနှုန်းသည် ၄၅ ရက်သက်တမ်းရှိသည်
ရှေ့သို့ ကော် 401
နောက်တစ်ခု: PA-5 ကိုချည်နှောင်ထားသည်
Zhejiang JIUERJIU CHEMICALS CO ။ , LTD
“ လင်းယုန်၏တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း” - ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးရှာဖွေခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုစိန်ခေါ်ခြင်း၊ အဓိကပြိုင်ဆိုင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်၊ စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုလက်ခံရန်နှင့်ပိုမိုအောင်မြင်မှုရရန်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခြင်း။
©မူပိုင်ခွင့် - 2010-2021: All Rights Reserved ။
Hot ထုတ်ကုန်များ- Sitemap- AMP မိုဘိုင်း